Portable Bluetooth HS 88A1 Printer
Portable Bluetooth printer HS 88A1 ၏ Print Resolution အပိုင်းကတော့ 8 dots/mm, 384 dots/line ဖြစ်ပါသည်။ Support 2D နှင့် 1D QR CODE Liunx (C ++)၊ Window,၊ Android, IOS အတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော SDK ပုံစံများပုံနှိပ်ခြင်း၊ Bluetooth အိတ်ဆောင် Mini Thermal Pirnter Bluetooth + USB port၊ Support 2D နှင့် 1D QR CODE ပုံနှိပ်ခြင်း၊ အစက်အမျိုးမျိုးပုံနှိပ်ခြင်း၊ အထူအမျိုးမျိုးဖြင့် SDK ကိုထောက်ပံ့ပေးပါသည်။
Portable Scanner LCD Display
Portable scanner ၏Resolutionကတော့ 600x600dpiဖြစ်ပါတယ်။ Document Size အနေနဲ့ 8.5in x 11in ,Speed - 13 sec/scan ကို သုံးပေးထားပါတယ်။ Interface ကတော့ USB 2.0 high speed ကိုအသုံးပြုပေးထားပါတယ်။
Portable Scanner ၏ Resoution ကတော့ 300/600/900 DPI ဖြစ်ပါသည်။ သူ့ရဲ Scanner Type ကတော့Handheld Scanners ဖြစ်ပါသည်။ Storage အနေနဲ့ MecroSD/ TF Card (up to 32G) အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Interface အနေနဲ့တော့ USB2.0 ကိုအသုံးပြုပေးထားပါတယ်။
Scanmarker Air Wireless Digital Highlighter ၏ Scanner Type သည်OCR Digital Highlighter and Reader ဖြစ်ပါသည်။Light Source ကတော့ Visible laser 650nm ဖြစ်ပါသည်။
Hotpot BBQ (63 x 26cm) Big
Hot pot BBQ သည် အကင်ရော ဟော့ပေါ့ရောလုပ်လို့ရတဲ့ ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီဥတု မ‌ရွေး အိမ်မှာ အကင်လုပ်စားလို့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အကင် hot pot အတွဲလေးသည် ကပ်လည်းမကပ် တူးလည်းမတူးသောကြောင့် အကင်စက်လေးကို မိသားစုတိုင်း ကြိုက်ကြမှာ အသေချာပါဘဲ။ Quality ကောင်းပြီး ဈေးတန်သောကြောင့် အခုဘဲ ဝယ်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နော်။
Hotpot BBQ (73 x 28cm) Big
2in1 BBQ & Hot pot အိုး သည် Qualityကောင်းပြီး စျေးတန်ပါတယ်။ အိမ်မှာ အချိန်မရွေးလုပ်စားလို့ရတဲ့ အကင်စက်လေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုတိုင်း ကြိုက်တဲ့ Hot Pot + BBQ အကင်အိုးလေးပါ။ Hot Pot နဲ့ BBQ အကင် ၂ မျိုးလုံး ချက်စားလို့ ရတဲ့အိုးလေးပါ။ အိမ်မှာပဲ မိသားစုနဲ့ TV အေးဆေး အကင် ကင်စားမလား? သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းများနဲ့ စကားပြောရင်းဖြစ်ဖြစ် တစ်ယောက်တစ်လှည့် ကင်စားကြမလား? ဘယ်လောက်တောင် အဆင်ပြေ အသုံးတည့်လဲ? ကဲ ..... ပြောနေတာ ကြာတယ် မြန်မြန်သာ ဝယ်ထားလိုက်တော့နော်......
Hotpot BBQ (73 x 28cm) Small
Hot pot BBQ သည် hotpot နှင့်အတူ အကင်ပါတွဲရက်အသုံးပြုနိုင်သော2in 1 Hotpot BBQ စက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး Material ဖြင့်ပြုလုပ်ပေးထားသည့်အတွက် အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး ကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်အစား အနေဖြင့်လည်း 73 x 28cm ရှိသည့်အတွက် စိတ်ကြိုက်ပမာဏထည့်၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
HA-05 Wireless IP Alarm Camera
မြင်ကွင်းကျယ် ရှုထောင့်မြင်ကွင်းများပါသည့် Pan-title Wifi ကင်မရာအဖြစ် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော cameraတစ်လုံးဖြစ်သည်။ Alarm ပါသောကြောင့် မူမမှန်တဲ့ပုံရိပ်များဖမ်းမိပါက မိမိဖုန်းသို့ Notification များတက်လာပါမည်။ထို့ပြင် audio two way ပါဝင်သည့်အတွက် အပြန်အလှန် စကားပြောဆိုနိုင်ပါသည်။
Ezviz Mini O HD WiFi Camera (CS-CV206)
မြင်ကွင်းကျယ် ရှုထောင့်မြင်ကွင်းများပါသည့် Pan-title Wifi ကင်မရာအဖြစ် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောcamera တစ်လုံးဖြစ်သည်။ ၃၆၀ ဒီဂရိကို အသုံးပြု၍ ပုံရိပ်များကို စောင့်ကြည့်နိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် audio two way ပါဝင်သည့်အတွက် အပြန်အလှန် စကားပြောဆိုနိုင်ပါသည်။
YY-Z100 IP Sim Modem Camera
မြင်ကွင်းကျယ် ရှုထောင့်မြင်ကွင်းများပါဝင်သည့် Pan-title Wifi ကင်မရာအဖြစ် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော camera တစ်လုံးဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် audio two way ပါဝင်သည့်အတွက် အပြန်အလှန် စကားပြောဆိုနိုင်ပါသည်။
IP Z-06HYL Sim Modem IP Camera
မြင်ကွင်းကျယ် ရှုထောင့်မြင်ကွင်းများပါသည့် Pan-title Wifi ကင်မရာအဖြစ် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော cameraတစ်လုံးဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် audio two way ပါဝင်သည့်အတွက် အပြန်အလှန် စကားပြောဆိုနိုင်ပါသည်။
Printer USB Cable သည် PC နဲ့ Printer ချိတ်ဆက် ပြီး data များထုတ်ယူအသုံးပြုနိုင်သော ကြိုးဖြစ်သည်။
Lite on External Drive
Lite on External Drive တွင် Speed 8x/8x/5x ဖြစ်တာကြောင့် ‌‌‌‌‌ဒေတာအချက်အလက်များကို အချိန်ခဏအတွင်းမှာ လျင်မြန်စွာ ကူးယူနိုင်ပါသည်။
Thinkpad External Drive
Thinkpad External Drive တွင် 8x burning speed ပါတာကြောင့် အချိန်ခဏအတွင်းမှာ မိမိ အလုပ်များကို ပြီးမြောက်စေမည့် ပစ္စည်းကောင်းလေးတစ်ခုဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Xiaoda Automatic Water Saver Topလေးနဲ့လက်ဆေးကြမယ်... Sensors လေးနဲ့ဆိုတော့ ခလုတ်နှိပ်စရာ၊ ခလုတ်ဖွင့်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ လက်သန့်မှကြိုက်တဲ့ လူကြီးမင်းတို့ လက်ခနခနဆေးတဲ့သူတွေအတွက် ခလုတ်ခနခနဖွင့်စရာမလိုပဲ Sensors လေးနဲ့ဆိုတော့အေးဆေးပဲပေါ့။
Bost Enchen Hair Clipper
Xiaomi Bost Enchen Hair Clipper လေးနဲ့ဆံပင်ညှပ်ကြမယ် အဆင့် ၈ဆင့်ပါဝင်တဲ့အတွက် မိမိဆံပင်ကိုလိုသလိုအတို၊ အရှည်၊ ဂတုံးအပြောင်ကြိုက်နှစ်သက်သလို ချိန်ညှိပြီးညှပ်နိုင်ပါတယ်။ဘေးအနားသပ် ဓါးများကအဝိုင်းအတုံးဖြစ်တဲ့အတွက်လဲထိခိုက်ရှနာလုံး၀မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
Samsung E339 Keypad
Samsung E339 လေးကတော့ CDMA 800သုံးတဲ့လူကြီးမင်းတို့အတွက်အဆင်ပြေစေပါတယ်။လိုင်းဆွဲအားအထူးကောင်းမွန်ပြီးကိုင်ဆောင်ရတယ့်အခါမှာလဲပေါ့ပါးကျစ်လစ်မှုရှိပါတယ်။ Battery အပိုင်းမှာဆိုရင်လဲ 800mAh ပါဝင်ပါတယ်။
Power Tree 650 VA UPS
Power Tree UPS များသည် စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းမွန်ပြီး အကြမ်းခံသော UPS အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ အဝင်မီအား 170 ဗို့မှ 250 ဗို့အတွင်း အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး မီးစက် အမျိုးအစားတိုင်းနှင့် အဆင်ပြေစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်မီး ပြတ်တောက် သွားချိန်တွင် အသုံးပြုလျှက်ရှိသော ကွန်ပျူတာမှ လုပ်လက်စ အလုပ်များကို သိမ်းဆည်းနိုင်ရန်အတွက် Backup Time ၁၅ မိနစ်ခန့် ရရှိမည်ဖြစ်သည်
Power Tree 1250 VA UPS
Power Tree 1250 VA UPS သည် Super Fast Charger ပါဝင်သည့်အတွက် အားသွင်းလျင် ၂ နာရီမှ ၄ နာရီအတွင်းဘက်ထရီသည် ၎င်း၏စွမ်းရည်၏ ၉၀% အထိအားသွင်းနိုင်သည်။ဗို့အားအလွန်အကျွံမြင့်တက်လာခြင်းတို့ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာကာကွယ်ရန်အတွက်ဗို့အားအတက်အကျမှလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှုကိုအလိုအလျောက်ထိန်းညှိပေးသည်။
XH212 YM188 (B+R) Dryer
မိုးရာသီရောက်ပြီဆိုတော့ အဝတ်တွေမခြောက်လို့ စိတ်ညစ်နေရတယ်။ လူကြားထဲ အဝတ်မခြောက်တဲ့ အောက်သိုးသိုးအနံ့ကြောင့် စိတ်အနှောက်အယှက်တွေ၊ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုလျော့ကျသွားတာမျိုး မဖြစ်ရအောင် အဝတ်ခြောက်စက်လေးက စွမ်းဆောင်ပေးပါတယ်။
Magicard Enduro Neo Duo STD Printer
Magicard Enduro Neo Duo STD Printer သည် တစ်ရောင်တည်း (Monochrome) အသုံးပြု Print ထုတ်ပါက ၇ စက္ကန့်လျှင် ၁ ကတ်နှုန်း၊ ကာလာစုံ (CMYKO) အသုံးပြု Print ထုတ်ပါက ၁ နာရီလျှင် ကတ် ၁၀၀ ခန့် အား Visual Security ထည့်သွင်းကာ 300dpi စွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် Secure Smart ID Card များ ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။
PP-900 Presenter သည် power point များတင်ပြရာတွင် ကွန်ပျူတာဘေးတွင် မတ်တပ်ရပ်ရန်မလိုဘဲ ၁၀ မီတာ အကွာအဝေးမှနေ၍လည်းအသုံးပြုနိုင်သည့်အတွက် အလွန်ကိုအဆင်ပြေစေပါသည်။
Projector Stand With Wheel Tripod (PDS-06)
PDS-06 tripod projector stand ကိုတာရှည်ခံသံပြားနှင့်ပိုက်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားပြီး စုစုပေါင်းအလေးချိန် ၁၅ ကီလိုဂရမ်ဖြစ်တာကြောင့် အလွယ်တကူသယ်ဆောင်သွားနိုင်မည့် ပစ္စည်းလေးဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
" data-item-price="252,000 Ks" data-item-avail="" data-item-availdesc="">
Ultra Short Throw Project Bracket
တပ်ဆင်ရလွယ်ကူပြီး Length:12.80"-29.13" ဖြစ်တာကြောင့် မိမိလိုအပ်သလို အနေအထားကို ထားနိုင်မှာ‌ ဖြစ်တာမို့ သုံးရ အဆင်ပြေစေမှာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Projector Stand ET-750/502M
မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုနေရာချထားနိုင်ပြီး တင်ပြချက်များနှင့်ရုပ်ပုံများကိုပြသနိုင်ပါသည်။ ရော်ဘာဖုံးအုပ်ထားသည့်ထောက်တိုင်နဲ့မို့ မတော်တဆလှုပ်ရှားမှုများကိုကာကွယ်နိုင်တာကြောင့် အရည်အသွေးကောင်းသည့် ပစ္စည်းလေးဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
DLB-502 Projector Stand (10-27)inch
Projector Stand လေးကတော့ အရွယ်အစားသေးသေးလေးဖြစ်ပြီး ဘယ်နေရာမဆို ထားရတာ အဆင်ပြေတာကြောင့် အသုံးပြုရ အဆင်ပြေစေမည့် ပစ္စည်းလေးဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
S02 PUBG Joystick
S02 PUBG Joystick နဲ့ Game ဆော့ကြမယ် ပျင်းလို့ပဲဆော့ဆော့ ပျော်လို့ပဲဆော့ဆော့ ခလုတ်လေးနဲ့ဆိုတော့အဆင်ပြေတာပေါ့...
One Plus7Warp 30W Car charger
အလုပ်များတတ်သူဆိုတော့ ကားမောင်းရင်း အားသွင်းဖို့အတွက် Car Charger တစ်ခု လိုနေတယ်။ အားသွင်းရမှာ အားပြည့်တာလည်း မြန်အုံး မှ ပေါပေါပဲပဲ အရည်အသွေး မကောင်းတာတွေလည်း မကြိုက်ဘူး ဆိုသူတွေအတွက် Quality လေး Brand လေး ကောင်းအုံးမှ ဆိုရင်တော့ One Plus Car Charger လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ သူကတော့ Input 12V/24V=4.5A ကိုသုံးထားတာဖြစ်တာကြောင့် အားဝင်မြန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
TM-011N Bluetooth HeadPhone
TM-011N Bluetooth HeadPhone လေဟာ Bluetooth Version အနေနဲ့ 4.0 နဲ့လာပေးထားပါတယ်။ အသံပိုင်းမှာဆိုရင်လဲ ကြည်လင်းတဲ့အသံကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ။ Battery အနေနဲ့ 200mAh လာပေးထားပါတယ်...... အားသွင်းချိန်ကတော့ 2.5hours ဖြစ်ပြီးတော့ Play time အနေနဲ့5hours ထိအသုံးပြုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်၊၊
2020, 2021 Game Pad Vibration
2020, 2021 Game Pad Vibration သည်ကြိုးမဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အဆုံးစွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရခြင်း၊တိကျသောထိန်းချုပ်မှု ပါဝင်သောကြောင့် အရည်အသွေးပိုင်းမှာ စိတ်ချရပါသည်။
1032 Wireless Game Pad (2 Player)
1032 Wireless Game Pad (2 Player) အမျိုးအစားသည် ခလုတ်များကို အလွယ်တကူပေါ့ပါးစွာ ပြောင်းရွေ့နှိုင်းမှာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် အသုံးပြုသည့်အခါ Controller သည် အိပ်စက်ခြင်းစနစ်သို့ အလိုအလျောက်သွားနိုင်ပါသည်။
X7 Gamepad သည်Bluetooth ကြိုးမဲ့ဖြစ်၍ Mobile Controller ISO Android Game Console Game Machine တွင် အထုပ်အပိုးများပါဝင်ပါသည်။ ထို့ပြင် လက်ကိုင်ဖုန်းများ၊တက်ဘလက်များ၊ set -top box များနှင့် စမတ်တီဗီများပေါ်တွင်2-3 ရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းများ၊ ဂိမ်းများအတွက် မတူညီသော နည်းလမ်းများနှင့် အဆင့်များကို ရိုးရှင်းစွာ လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းပြီးလိုက်ဖက်သော တိုးတက်မှုများပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ရွေးချယ်သင့်တဲ့ ပစ္စည်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
890B, 9090 Game Pad Vibration (2Player)
890B, 9090 Game Pad Vibration (2Player) သည် စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်များ၊ စမတ်တီဗီများအတွက်အသုံးပြုလို့ရသောကြိုးမဲ့Controller လေးဖြစ်ပြီး အသစ်မြှင့်ထားတင်ထား Game Pad လေးလည်းဖြစ်ပါသည်။
Artwork 208TD Game Pad (2 Player)
Artwork 208TD Game Pad (2 Player) သည်ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာပြောစရာမလိုအောင် ထူးခြားပြီးကစားရာတွင်စိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်အဝ ပေးမည့်Game Pad လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
PC Webcam 720P (Z05)
PC Webcam 720P (Z05)လက်ရာမြောက်သောအသွင်အပြင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး အရည်အသွေးပိုင်းတွင်လည်း720p pixelsပါဝင်၍ ကောင်းမွန်သောပုံရိပ်ကောင်းကောင်းမြင်နိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။၃၀ ဒီဂရီလှည့်နိုင်သောကြောင့်သင်ကြိုက်သလောက်ထောင့်ကိုညှိနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
HP H300 Gaming Headphone
Gamer တွေထဲမှာ 7.1 sound လိုချင်တဲ့လူရှိမယ်။ သီချင်းကို ရှယ်နားထောင်ရင်းနဲ့ Feel တစ်မျိုးယူပြီး ဂိမ်းဆော့တဲ့လူရှိမယ်။ Stereo sound ကိုပဲသက်သက်လိုချင်တဲ့လူရှိမယ်။ကိုယ်နဲ့ကိုက်တဲ့ Headphone တစ်ခု့ကို ဘယ်လိုရွေးရမလဲ H160GS က Ear pad ကျယ်တော့ 7.1 surround sound ရဲ့ Distance အရသာကိုလဲကောင်းကောင်းရမယ်။H300 က Bass ကောင်းပြီး Vibration ပါတော့ သီချင်းနားထောင်တဲ့လူတွေရယ်။ Sci-fi shooter Game ဆော့တဲ့လူတွေရယ်အတွက် Explosion တွေကျရင် တုန်ခါမှု့နဲ့အတူ realistic ဆန်တဲ့ အရသာတစ်ခု့ကိုရမယ်။ Vibrate မကြိုက်ရင်လဲ off ထားလို့ရပါတယ်။ Bass သံကတော့ ကောင်းနေဦးမှာပါ။H320GS က အပေါ်က၂ခု့နဲ့ဆင်ပြီးတော့ နားရွက်ကို နည်းနည်းကြပ်ကြပ်နဲ့ ခေါင်းကို ကုတ်ထားတဲ့ Style မျိုးကိုကြိုက်ရင်ရွေးရမှာပါ။
PC Webcam 1080P FHD(MT)
PC FHD(MT Webcam ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကြည်လင်ပြတ်သားသော အသံများကို ဖမ်းယူနိုင်သောကြောင့် ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ ကြားရမည်ဖြစ်သည်။ ရုပ်ထွက်ပိုင်းအနေဖြင့်လည်း1080P Resolutionကိုအသုံးပြုပေးထားသည့်အတွက်‌ကြောင့် ပိုမိုရှင်းလင်းပြတ်သားသော မြင်ကွင်းကို မြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
DSLR Camera Bag လေးကတော့ ရိုးရှင်းတဲ့ ဒီဇိုင်းလေးဖြစ်ပြီး ခိုင်ခန့်တဲ့ ချုက်သားတွေ၊ ညီညာတဲ့ ချုပ်ရိုးတွေနဲ့ သေသပ်လှပနေမှာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
FB EOS Charger (LP-E8)
ဒီ charger လေးဟာဆိုရင် Canon EOS 550D 600D Rebel T2i T3i Kiss-X4 X5 Cameras တို့အတွက်အသုံးပြုနိုင်အောင်ထုတ်လုပ်ထားပြီးတော့ First Charging ပါဝင်တဲ့ charger လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ smart charging အဖြစ်ထုတ်လုပ်ထားပြီးတော့ LED indicator လည်း ပါဝင်ပါသေးတယ်။
ဒီ Headphone လေးဟာ Phone မှာ သုံးလို့ရသလို Computer မှာလည်း အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။ Phone call , music အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေတဲ့ headphone လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Anitech GH-200 Gaming Headphone
မိုက်ကရိုဖုန်း Built In ပါဝင်တဲ့ Anitech အမှတ်တံဆိပ် GH200 Stereo Headphone (အနီရောင်) ဖြစ်ပါတယ်။ Stereo 2.0 အသုံးပြု Gaming headphone အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အရည်အသွေးမြင့် ပစ္စည်းတွေနဲ့ ထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး အထူးပျော့ပျောင်းတဲ့ နားကြပ်အုပ်ကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် သက်တောင့်သက်သာနဲ့ ကြာရှည်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အရှည် (၂.၁) မီတာရှိ 3.5 mm Jack နားကြပ်ကြိုးနဲ့ မိမိရဲ့ကွန်ပြူတာ/စမတ်ဖုန်းတွေကို ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
P47 Wireless Headphone သည် Bluetooth version V4.1 ကိုအသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ wireless အနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရသလို ကြိုးတပ်၍ လည်းအသုံးပြုလို့ရသောကြောင့် မည်သည့် ဖုန်း ကွန်ပျူတာ အမျိုးအစားမျိုးနဲ့မဆို အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်တာကြောင့် လူကြီးမင်း တို့အတွက် အဆင်ပြေလွယ်ကူစေပါတယ်။ ခရီးသွားချိန်အိတ်ထဲတွင် အလွယ်တကူထည့်သိမ်းနိုင်အောင် ခေါက်သွားလို့ရတာမို့ သွားလေရာဆောင်သွားလို့ရပါတယ်။
Camera EN-EL19 Battery
EN-EL19 Battery သည် Nikon အတွက်ထုတ်လုပ်ထားသော Replacement battery ပဲဖြစ်ပါတယ်။ capacity 700 mAh ပါဝင်ပြီးတော့ 3.7 V output ဖြစ်ပါတယ်။
EN-EL19 Charger သည် output voltage 4.2 V ရှိပြီး capacity 600mAh ရှိသော charger အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ charger နဲ့သင့်တော်တဲ့ Nikon series တွေကတော့ Coolpix S32 မှ Coolpix S7000 ထိ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Sony DSC-RX0 အတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။
အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုနိုင်အောင် Li-Ion နည်းပညာကိုအဆင့်မြင့်စွာ ပြုလုပ်ထားပြီး output voltage 7.0 V နှင့် capacity 1900 mAh ဖြစ်ပါတယ်။ Nikon D7000, V1, D600, D800, D800E, D7100, D610, D810, D810A, D750, D7200, D500 cameras များတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Nikon D5500, D3400, D3300, D5300, D5600, D5200, D3200, D3100, D5100, DF DSLR, Coolpix P7700, P7000, P7800, P7100 စသော camera များတွင်ပါဝင်သော battery များအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Sunqs NB-4L Charger
LED indicator ပါဝင်တာကြောင့်လည်း သင့်battery အားကို အလွယ်တကူ ကြည့်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Canon ELPH 330 HS, ELPH 300 HS, VIXIA mini, ELPH 100 HS, ELPH 310 HS, Powershot SD1400 IS, SD750, SD1000, SD600, SD1100 IS, SD630, SD400, SD450, SD780, CB-2LV စသည့် camera တို့တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Eneloop Rechargeable & Battery 4Pcs
ပြန်လည်းအားသွင်းပြီးအသုံးပြုနိုင်တဲ့ battery အမျိုးအစားလေးဖြစ်ပြီးတော့ Charger တွဲရက်ပါတဲ့ series လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Charger output ကတော့ DC 1.5 V AA 200mAh or AAA 100mAh ဖြစ်ပါတယ်။
Duplicator 9Bay Casing
Duplicator 9Bay Casing သည် ရိုးရုင်းသောဒီဇိုင််းလေးဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောကြောင့် လူကြီးမင်းတို့စိတ်တိုင်းကျ ဖြစ်စေမှာ အမှန်ပါဘဲ။
Sunqs NB-9L Battery
ပြန်လည်အားသွင်း၍ အသုံးပြုနိုင်သော Battery အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး Canon Digital Camera များတွင် အသုံးပြုနိုင်အောင် ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ output voltage 3.5 V ရှိပြီးတော့ Capacity 700mAh ဖြစ်ပါတယ်။
ET 800 Fixed Phone
ET 800 Fixed Phone သည် CDMA 800MHz အတွက် အသုံးပြုရ ရပြီး Battery အနေနဲ့ 1000mAh ပါဝင်ပါတယ်။
100W Multi Adapter (USB) Good (8Head)
အရွယ်အစားမတူညီတဲ့ connector head ၈ခုပါဝင်တဲ့ Multi Adapter လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Power 100 W ဖြစ်ပြီး output voltage ကို 12 V မှ 20 V ထိ အလိုလျောက်ထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်။ connector head ၈ခုတောင်ပါဝင်တာကြောင့် ဒီ adapter တစ်ခုရှိတာနဲ့တင် အလုပ်ရှုပ်သက်သာစေမယ့် adapter လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
100W LCD Multi Adapter
100W LCD Multi Adapter လေးဖြစ်ပါတယ်။ Power 100 W ဖြစ်ပြီးတော့ output voltage ကို 12 V မှ 20 V ထိ အလိုလျောက်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်။ LCD Indicator ပါဝင်တာကြောင့် အားသွင်းနေချိန် အားဘယ်လောက်ရှိနေသည်ကို အလွယ်တကူသိနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Free connector head ဖြစ်တာကြောင့် အခြားသော connector head များနှင့်လည်း တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
VGA Splitter4Ports
Input အနေဖြင့် VGA 1Port ပါဝင်ပြီး output အနေဖြင့် VGA4port ပါဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။refresh rate အနေဖြင့် 450 MHz ဖြစ်သဖြင့် လှုပ်ရှားမူများလည်းကောင်းမွန်စေပါသည်။Resolution ပိုင်းအနေဖြင့် 1920x1440 ဖြစ်သဖြင့် ကြည်လင်ပြတ်သားသော ရုပ်ထွက်ကိုရရှိစေမည်ဖြစ်ပါသည်။
A3 size ထိဖြတ်နိုင်သော paper cutter ပဲဖြစ်ပါတယ်။ cutter mode ကတော့ manual ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါဖြတ်လျှင် 80 gsm ထိဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
VGA Splitter 8 Ports
VGA Splitter 8 Ports သည် output အနေဖြင့် VGA 8 port ပါဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။refresh rate အနေဖြင့် 350 MHz ဖြစ်သဖြင့် လှုပ်ရှားမူများလည်းကောင်းမွန်စေပါသည်။Resolution ပိုင်းအနေဖြင့် 1920x1440 ဖြစ်သဖြင့် ကြည်လင်ပြတ်သားသော ရုပ်ထွက်ကိုရရှိစေမည်ဖြစ်ပါသည်။
Rexel A400 Trimmer Paper Cutter
Rexel မှထုတ်လုပ်ထားသော smart cutter တစ်ခုဖြစ်ပြီး A4 size ထိဖြတ်တောက်နိုင်ပါတယ်။ Cutting mode မှာ Manual mode ဖြစ်ပြီး တစ်ခါဖြတ်လျှင် 10 sheets / 80 gsm ထိဖြတ်တောက်နိုင်ပါတယ်။ Ruler များပါရှိတာကြောင့် တိတိကျကျဖြတ်တောက်ဖို့ အဆင်ပြေစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
HDMI Splitter 16 Ports သည်Input အနေဖြင့် HDMI 1Port ပါဝင်ပြီး output အနေဖြင့် HDMI 16 port ပါဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။Resolution ပိုင်းတွင်လည်း 4k version ကိုရရှိမည်ဖြစ်သဖြင့် ကြည်လင်ပြတ်သားသော ရုပ်ထွက်ကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
VGA4Port Switch သည် ကြားခံတစ်ခုအဖြစ် printer, Projector, အစရှိသည်တို့ကြားအသုံးပြုသည် ။ခလုတ်ပါဝင်သဖြင့်မိမိပစ္စည်းများကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
Allways UPS Battery
Allways UPS Battery တွင် Voltage 12V-7.5Ah ပါဝင်မှာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
HDMI Extender Cat 5e/6 60M
HDMI cable သည်အများဆုံး ပေ60 အထိ ရရှိနိုင်သောကြောင့် ပေ60အထက်ကြိုးအရှည်ဆွဲလိုသူများအတွက် HDMI extender cable ကိုအသုံးပြုကြသည်။အရည်အသွေးမြင့် metal design ပုံစံဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါသည်။
Fingerprint Lock Padlock Security
Fingerprint Lock Padlock Security သည် နောက်ဆုံးခေတ်မှီ designဖြစ်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချစွာ lock ချနိင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ fingerprint ပေါင်း ၁၅ ခုထိ အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့် မိသာစုသုံးလျှင်လည်း အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်သည်။မိမိ ဖုန်း bluetooth ဖြင့် join အသုံးပြုရသော်လည်း မည်သည့်ဖုန်းမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။fingerprint lock ဖြစ်သောကြောင့် အားပြန်သွင်းပေးရန်လိုအပ်ပေသည်။
HDMI Extendar Cat 5e/6e 60M POE
HDMI cable သည်အများဆုံး ပေ60 အထိ ရရှိနိုင်သောကြောင့် ပေ60အထက်ကြိုးအရှည်ဆွဲလိုသူများအတွက် HDMI extender cable ကိုအသုံးပြုကြသည်။အရည်အသွေးမြင့် metal design ပုံစံဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါသည်။network poe ဖြစ်သဖြင့် network နှင့် power အလုပ်၂ခုကို တစ်ပြိုင်နက်လုပ်ဆောင်ပေးသည်။
HDMI Cat 5e/6e Extendar 150M
HDMI cable သည်အများဆုံး ပေ150 အထိ ရရှိနိုင်သောကြောင့် ပေ150အထက်ကြိုးအရှည်ဆွဲလိုသူများအတွက် HDMI extender cable ကိုအသုံးပြုကြသည်။အရည်အသွေးမြင့် metal design ပုံစံဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါသည်
HDMI Splitter4Port (China)
သည်Input အနေဖြင့် HDMI 1Port ပါဝင်ပြီး output အနေဖြင့် HDMI4port ပါဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။Resolution ပိုင်းတွင်လည်း full HD resolutions ကိုရရှိမည်ဖြစ်သဖြင့် ကြည်လင်ပြတ်သားသော ရုပ်ထွက်ကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
HDMI Splitter 8 Port (China)
HDMI Splitter 8 Ports သည်Input အနေဖြင့် HDMI 1Port ပါဝင်ပြီး output အနေဖြင့် HDMI 8 port ပါဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။Resolution ပိုင်းတွင်လည်း 4k version ကိုရရှိမည်ဖြစ်သဖြင့် ကြည်လင်ပြတ်သားသော ရုပ်ထွက်ကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Media Player သည် မိမိသုံးလိုသည့် အရာများကို USB stick သော်လည်းကောင်း cardreadeသော်လည်းကောင်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ Media Player ကိုချိတ်ဆက်အသုံးပြုရာတွင် HDMI port နှင့် AV port များပါဝင်သည့်အတွက်အသုံးပြုရအဆင်ပြေလွယ်ကူစေမှာဖြစ်ပါသည်။external HDD 128GB ပါဝင်ပါသည်။
Patch Cord LC-FC 30m
H!Fiber ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Patch Cord LC-FC cable လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရှည်ကတော့ ၃၀မီတာဖြစ်ပါတယ်။ Fiber Type ကတော့ Single mode ဖြစ်ပြီးတော့ Duplex အမျိုးအစားလေးဖြစ်ပါတယ်။ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ Cable ပါပဲ။
Patch Cord FC-LC 3m
H!Fiber ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Patch Cord LC-FC cable လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရှည်ကတော့ ၃မီတာဖြစ်ပါတယ်။ Fiber Type ကတော့ Single mode ဖြစ်ပြီးတော့ Duplex အမျိုးအစားလေးဖြစ်ပါတယ်။ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ Cable ပါပဲ။
Patch Cord FC-LC 10m
H!Fiber ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Patch Cord LC-FC cable လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရှည်ကတော့ ၁၀မီတာဖြစ်ပါတယ်။ Fiber Type ကတော့ Single mode ဖြစ်ပြီးတော့ Duplex အမျိုးအစားလေးဖြစ်ပါတယ်။ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ Cable ပါပဲ။
Patch Cord FC-FC 20m
EB-Link ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Patch Cord FC-FC cable လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရှည်ကတော့ ၂၀မီတာဖြစ်ပါတယ်။ Fiber Type ကတော့ Single mode ဖြစ်ပြီးတော့ Simplex အမျိုးအစားလေးဖြစ်ပါတယ်။ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ Cable ပါပဲ။
Patch Cord FC-FC 10m
Fibertronic ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Patch Cord FC-FC cable လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရှည်ကတော့ ၁၀မီတာဖြစ်ပါတယ်။ Fiber Type ကတော့ Single mode ဖြစ်ပြီးတော့ Duplex အမျိုးအစားလေးဖြစ်ပါတယ်။ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ Cable ပါပဲ။
Crimping Tool Blue
SK-868G သည်SUNKITမှထုတ်သောCrimp Toolလေးဖြစ်တာကြောင့်Cable crimper ၊Crimping tool 8p 6p RJ45 RJ11 Plug ကွန်ယက်နှင့်တယ်လီဖုန်းကေဘယ်လ် နှစ်မျိုးသုံးအလုပ်လုပ်နိုင်သည့် Crimpingလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
G13 Bluetooth Car MP3
G13 Bluetooth Car MP3 လေးကတော့ Wireless Function လေးဖြစ်ပြီး USB2Ports ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ FM, MP3 တို့ကို စိတ်ကြိုက်နားဆင်ခံစားနိုင်မှာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Trendnet TFC-1000S20 Fiber Media Converter
TFC-1000S20 Fiber Media Converter သည် TFC-1600 ကိုယ်ထည်စနစ်နှင့် သီးခြားယူနစ်အဖြစ် အလုပ်လုပ်ပါသည်။ ဒီ converter လေးသည် SNMP ကိုပံ့ပိုးပေးပြီး အကွာအဝေး ၂၀ကီလိုမီတာ (၁၂.၄မိုင်)ထိ ကျယ်ပြန့်သော Single Mode SC-Type converter တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ SC-type single mode fiber port သည်အကွာအဝေး ၂၀ ကီလိုမီတာအထိဆက်သွယ်နိုင်သည်။
G9 Wifi Display Dongle
G9 Wifi Display Dongle သည် တီဗွီ၊ ပရိုဂျက်တာ နှင့် မည်သည့် HDMI မျက်နှာပြင်ကိုမဆို ကြိုးမဲ့စနစ်ဖြင့် သင်၏ဖုန်း၊ တက်ဘလက် (သို့မဟုတ် ) ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်တို့ဖြင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Media Converter 60KM (950GS-60A+B)
GST-806A60 သည်အသုံးပြုရလွယ်ကူသည့် Bi-directional media converter တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ စမတ်မီဒီယာပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အတူနည်းပညာနှင့် plug and play နည်းပညာများလည်း ဒီ converter လေးမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ GST-806A60 သည် fiber optic cable မှတဆင့်တည်ငြိမ်သော Gigabitကို ရှည်လျားသောအကွာအသေးအထိ အထောက်အကူပြုပါသည်။ 10/100 / 1000Base-T နှင့် 1000 / LX interfaces အကြားမီဒီယာများကိုလည်း ပြောင်းလဲပေးထားပါသည်။ GST-806A60 သည် TP port တွင် Auto MDI / MDI-X ပါဝင်ပြီး DIP ခလုတ်နှင့်အတူ auto-ညှိနှိုင်းခြင်း၊ fiber interface အတွက် force နှင့် Link Pass Through function စသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များ စိတ်ကြိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
PCIE-1394 Fire Wire Card
PCIE-1394 Fire Wire Card ကိုရရှိနိုင်သော PCL Express solt တွင်မဆို တပ်ဆင်နိုင်ပြီး 400Mbps အထိ data transfer နှုန်းကို ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။
Micca 1080P Media Player
Micca Speck G2 သည်မည်သည့် TV နှင့် HDTV တွင်မဆို 1080P Full-HD resolution အထိလူကြိုက်အများဆုံးဗွီဒီယို၊ တေးဂီတနှင့်ဓာတ်ပုံပုံစံများကိုအဆင်ပြေစွာပြန်ဖွင့်နိုင်ပါသည်။ ကြည်လင်သောဒစ်ဂျစ်တယ်ဗွီဒီယိုများပေးပို့ရန် HDMI output အပြင် analog TV များနှင့်အသုံးပြုရန်ပေါင်းစပ်ထားသော AV output များလည်းပါရှိပါသည်။ ကားပါဝါ adapter တစ်ခုနှင့်အတူ Micca Speck G2 ကိုကားအတွင်းမှဗီဒီယိုစနစ်တွင်ရုပ်ရှင်ပြသရန်နှင့်ဖျော်ဖြေမှုများအားလုံးကိုလမ်းခရီး၌သွားရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
SY-468A Network Cable Tester
SY-468A Network Cable Tester ဝါယာကြိုးမတော်တဆမှုများကိုရှာဖွေရန်နှင့်စမ်းသပ် ခြင်းဖြင့်ကွန်ယက်ကိုချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်စေပါသည်Ethernet patch ကြိုးများကို စစ်ဆေးရန်လည်းအသုံပြုနိုင်သည်။RJ45 ကေဘယ်လ်များ၊ RJ11 တယ်လီဖုန်းကေဘယ်လ်နှင့် ကွန်ယက်ကေဘယ်ကြိုးများကိုလည်းစစ်ဆေးနိုင်သည်။
XL-5068 USB 3.0 7-Port Hub
ပါးလွှာပေါ့ပါးသောဒီဇိုင်းနှင့် အဆင့်မြင့် USB နည်းပညာကို ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသော USB HUB ကောင်းလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါသည်။ Port တိုင်းတွင် USB 3.0 နည်းပညာဖြင့် တပ်ဆင်ထားပြီး 5Gb/s ထိ ဒေတာများကို လွှဲပြောင်းနိုင်ပါသည်။
USB TV Stick (DVB-T2)
USB TV Stickသည်သင်၏ PC တွင်သက်သေပြနိုင်သော DVB-T2 / T / C နည်းပညာကိုခံစားနိုင်သည်။သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိမူလဒစ်ဂျစ်တယ်အရည်အသွေးကိုစောင့်ကြည့်ပြီးမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။သေးငယ်ပြီးကျစ်လစ်သော ပုံစံ ဖြစ်တာကြောင့်သယ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသည်။
သင်၏ USB ထုတ်ကုန်များကိုကျယ်ပြန့်စွာကျယ်ပြန့်စွာတိုးချဲ့နိုင်ပါသည်။ ကေဘယ်လ်တွင်ထပ်မံ၍ သွားရန်ခွင့်ပြုသည့် built-in extender 10 မီတာအရှည် ပါရှိသည်။ မီတာ ၂၀ အရှည်ရရှိရန်အတွက်ကြိုးနှစ်ချောင်းကိုအတူတကွချိတ်ဆက်၍လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
USB 2.0 မှ SATA / IDE Cable ကို USB 2.0 interface ဖြင့်ကွန်ပျူတာသို့ Hard disk, CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW, COMBO ကိရိယာ၊ DVD-RW ကိုချိတ်ဆက်ရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ USB 2.0 သည် 480Mb/s data transfer ဖြင့် 52x CDROM အချက်အလက်များကိုဖတ်နိုင်ပါသည်။ External power supply ကို AC90v-264v, 47-63Hz တွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Printer USB Cable 10M (Gray)
USB 2.0 A Male to B male ခေါင်းပြောင်းပါသော ကေဘယ်ဖြစ်ပြီး Printer များအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ data transfer rate 480 mb/s ရှိပြီး ၁၀မီတာရှည်လျားရှိသောကြောင့် ကောင်းစွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
USB Extension Cable 5M (White)
သင်၏ USB ထုတ်ကုန်များကိုကျယ်ပြန့်စွာကျယ်ပြန့်စွာတိုးချဲ့နိုင်ပါသည်။ ကေဘယ်လ်တွင်ထပ်မံ၍ သွားရန်ခွင့်ပြုသည့် built-in extender ၅ မီတာအရှည် ပါရှိသည်။ မီတာ ၁၀ အရှည်ရရှိရန်အတွက်ကြိုးနှစ်ချောင်းကိုအတူတကွချိတ်ဆက်၍လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
USB Extension Cable 10M (White)
၁၀မီတာရှည်လျားသော High Resolution VGA ကြိုးပဲဖြစ်ပါသည်။ VGA မှ ဖြစ်နိုင်သော အမြင့်ဆုံးဗီဒီယိုအရည်အသွေးကိုးထောက်ပံ့နိုင်ရန် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပါသည်။ 1920 x 1200 အထက်ရှိသော resolution application များအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။
၁၅မီတာရှည်လျားသော High Resolution VGA ကြိုးပဲဖြစ်ပါသည်။ VGA မှ ဖြစ်နိုင်သော အမြင့်ဆုံးဗီဒီယိုအရည်အသွေးကိုးထောက်ပံ့နိုင်ရန် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပါသည်။ 1920 x 1200 အထက်ရှိသော resolution application များအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။
၂၀မီတာရှည်လျားသော High Resolution VGA ကြိုးပဲဖြစ်ပါသည်။ VGA မှ ဖြစ်နိုင်သော အမြင့်ဆုံးဗီဒီယိုအရည်အသွေးကိုးထောက်ပံ့နိုင်ရန် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပါသည်။ 1920 x 1200 အထက်ရှိသော resolution application များအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။
၃၀မီတာရှည်လျားသော High Resolution VGA ကြိုးပဲဖြစ်ပါသည်။ VGA မှ ဖြစ်နိုင်သော အမြင့်ဆုံးဗီဒီယိုအရည်အသွေးကိုးထောက်ပံ့နိုင်ရန် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပါသည်။ 1920 x 1200 အထက်ရှိသော resolution application များအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။
" data-item-price="13,000 Ks" data-item-avail="" data-item-availdesc="">
32 x 19 (10000) Paper)
32 x 19 (10000) Paper) သည် အရွယ်အစား A4, A4R, A3, SRA , 13"x 19" (330 x 485 mm) အထိစာမျက်နှာဖော်ပြချက်များပါရှိသည်။အထွေထွေရုံးသုံးများအတွက် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော Paper လေးဖြစ်ပါသည်။
HDMI Cable 5m 4K (premium)
နောက်ဆုံးပေါ် HDMI အမျိုးအစားဖြစ်ပီး Standard HDMI 2.0 သည် အမြန်နှုန်း 18Gbps - 24K ဖြစ်ပါသည်။ ရွှေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော Connectors Ethernet, 3D, 4K ဗွီဒီယိုနှင့် Audio Return Channel တို့ဖြင့်လိုက်ဖက်သော HDMI 2.0 / HDMI2.0A / B ကေဘယ်လ်ကြိုး တို့ပါဝင်ပါသည်။ TV, 3D TV, HDTV နှင့် 4k ultra HD ရုပ်မြင်သံကြားစက်များ၊ Samsung နှင့် LG၊ Apple TV၊ Sony TV နှင့် 3D TV တို့နှင့်အဆင်ပြေစွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
High speed HDMI Cable ဖြစ်ပြီး အရည်အသွေးပြည့်ဝသော Cable အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ပုံရိပ်များကို ကြည်လင်ပြတ်သား စွာမြင်နိုင်ပြီး Resolution 4K (4096 x 2160 @30Hz) ထိ support ပေးနိုင်ပါသည်။
High speed HDMI Cable ဖြစ်ပြီး အရည်အသွေးပြည့်ဝသော Cable အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ ပုံရိပ်များကို ကြည်လင်ပြတ်သားစွာမြင်နိုင်ပြီး Resolution 4K (4096 x 2160 @30Hz) ထိ support ပေးနိုင်ပါသည်။
High speed HDMI Cable ဖြစ်ပြီး အရည်အသွေးပြည့်ဝသော Cable အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ ပုံရိပ်များကို ကြည်လင် ပြတ်သားစွာမြင်နိုင်ပြီး Resolution 4K (4096 x 2160 @30Hz) ထိ support ပေးနိုင်ပါသည်။
32x25 Paper (10000)
32x25 Paper (10000) ကိုမည်သည့်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မဆို အထွေထွေရုံးသုံးရန်အတွက် အရည်အသွေးမြင့်ပြီး အကွာအဝေး ၃၂ x၂၅ မီလီမီတာ ဘားကုဒ်တံဆိပ်လေးကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
Mini HDMI to VGA cable ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေရောင် connector များဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး ချေးတက်ခြင်းအား ကာကွယ်စေရုံသာမက တင်းကြပ်မှုကိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီး signal performance ကို တိုးတက်စေပါတယ်။ Resolution မှာလည်း 1920 x 1200 and 1080 (Full HD) resolution ကို ပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့် ကြည်လင်ပြတ်သားသော ပုံရိပ်များကို မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Low-profile connector သည် သင်၏ကွန်ပျူတာကပ်လျှက်ရှိ Port များပိတ်ဆို့ခြင်း၊ သက်တမ်းရှည်ရန် strain-relief ကိုပုံဖော်ထားခြင်းနှင့် လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ဖြုတ်ခြင်းများအတွက် ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။
60x20 Paper (MT)
60x20 Paper (MT) သည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး မည်သည့်လုပ်ငန်းမဆိုအသုံးပြုရ လွယ်ကူမည့် Paper လေးဖြစ်ပါသည်။ Paper size အနေဖြင့် 4A0, 2A0, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 and A10 ပါဝင်ပါသည်။
HDTV3IN 1 HDMI Cable
HDMI3in 1 cable မှာဆိုရင် HDMI နှင့်အတူ Lighting, Type-C, Micro USB တို့ကို ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဓါတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုဖိုင်များကို ဖုန်းသို့မဟုတ် အခြားသောဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို Big Screen ပေါ်တွင်ကြည့်ရှုနိုင်အောင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ 1080 p Full HD ထိ support ပေးနိုင်သောကြောင့် ရှင်းလင်းပြတ်သားသော ပုံရိပ်များကို မြင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Sublimation Transfer Paper (100 Sheets)
Sublimation Transfer Paper (100 Sheets) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် အရောင်အသွေးပိုမိုတောက်ပစေပြီး လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာ အဆင်ပြေချောမွေ့စေမှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
Type-C to HDMI Cable ကို HDTV သို့မဟုတ် HDMI အသုံးပြုနိုင်သည့် screen နှင့်သင်၏ USB-C ပါသော MacBook, MacBook Pro, iMac သို့မဟုတ် iMac Pro ကိုချိတ်ဆက်ရန် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဒီ adapter သည် 4K @ 60hz (4096 by 2160) resolution အထိထောက်ပံ့ထားသောကြောင့် ကြည်လင်ပြတ်သားသောပုံရိပ်များကို ကြည့်ရှုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
32x19 Paper (10000)
32x19 Paper (10000) သည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး အသုံးပြုရာတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စေမှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ပြင်စာရွက်အရွယ်အစားပိုင်းမှာဆိုလျှင် (A4 /A3 / SRA3 ) (POD DECK LITE-C1) 1 x 4000 စာရွက်ပါရှိပြီး အထွေထွေရုံးသုံးအတွက်အကောင်းမွန်ဆုံး Paper လေးဖြစ်ပါတယ်။
Type C to LAN USB 3.0 Cable
USB 3.1 Type-C နှင့် Ethernet Adapter ကိုသုံးပြီး Ethernet port မပါပဲကွန်ပျူတာများကို Ethernet network သို့လွယ်ကူစွာချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်။ Macbook သို့မဟုတ် PC ကို Ethernet cable သို့ချိတ်ဆက်ရန် adapter ၏ built-in Gigabit Ethernet port ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ပိုမိုမြန်ဆန်သော network speed ကိုရရှိစေသည်။ adapter သည် 1000 BASE-T ကွန်ယက်၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အမြန်နှုန်း5Gbps အထိ Ethernet data transfer ကိုထောက်ပံ့ပေးပါသည်။
USB 3.0 To VGA Cable(Wins-7/8)
USB 3.0 To VGA Cable သည် Desktop or Laptop ကို Multi-monitor environment သို့ပြောင်းပေးပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့် Multi-Monitor သို့မဟုတ် Dual Display Option တို့ကိုတိုးချဲ့ရန် VGA ပါ၀င်သောမော်နီတာများ၊ ပရိုဂျက်တာများ၊ သို့မဟုတ် HDTV များကိုကွန်ပျူတာနှင့်ဆက်သွယ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
USB Type-C ကွန်ပျူတာကို HDMI တပ်ဆင်ထားသော Display နှင့်ချိတ်ဆက်ရန် အသုံးပြုပါသည်။ 4K Resolution ထိထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့် ကြည်လင်ပြတ်သားသောပုံရိပ်များကို ကောင်းစွာ မြင်နိုင်မာဖြစ်ပါသည်။
USB 3.0 or Type C ပါဝင်သော ကွန်ပျူတာနှင့် ကွန်ပျူတာဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက် ဒေတာကူးပြောင်းခြင်းများအတွက် ကောင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အရှည် ၃ မီတာနှင့် data transfer rate 10 Mb/s ထိ အမြင့်ဆုံးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Type C to USB 3.0 cable (0.5m)
USB 3.0 or Type C ပါဝင်သော ကွန်ပျူတာနှင့် ကွန်ပျူတာဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက် ဒေတာကူးပြောင်းခြင်းများအတွက် ကောင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အရှည် ၀.၅ မီတာနှင့် data transfer rate 10 Mb/s ထိ အမြင့်ဆုံးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
HDMI မှ AV သို့ပြောင်းနိုင်သော cable ဖြစ်ပြီး resolution 1080p ထိထောက်ပံ့နိုင်သော converter လည်းဖြစ်ပါတယ်။ HDMI signal ကို RCA (AV) ပေါင်းစပ်ထားသောဗွီဒီယိုနှင့် L / R စတီရီယိုအသံသို့ ကောင်းစွာ ပြောင်းလဲပေးပါတယ်။ HD3 to RCA သို့မဟုတ် PS3, DVD, PC, Blue-Ray, Xbox One, Xbox 360, Roku Chromecast, Roku TV, Apple TV, Older TV, Monitor, Projector တို့နှင့်ကောင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဒီကေဘယ်သည် VGA to HDMI သို့ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီး အရှည်အားဖြင့် ၁.၅မီတာရှည်လျားပါသည်။ PC, Notebook, Desktop များကို VGA Output (D-Sub, HD 15 pin) ဖြင့် HDMI Input နှင့်အတူ Monitor များ၊ Projector များဖြင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤ adapter သည် ဗီဒီယိုနှင့်အသံကိုတပြိုင်တည်း ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ 1920 x 1080 resolution ဖြစ်တာကြောင့် ကြည်လင်ပြတ်သားသော ပုံရိပ်များကို မြင်တွေ့နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါသည်။
JS HDMI Cable (5m)
JS HDMI Cable (10m)
JS HDMI Cable (20m)
USB To Sata IDE Cable 3.0
USB 3.0 to IDE / SATA Adapter Cable သည် USB 3.0 Port (USB 2.0 ) မှတစ်ဆင့် ၂.၅လက်မ (သို့) ၃.၅လက်မရှိသည့် မည်သည့် sata (သို့) IDE hard drive ကိုမဆိုကွန်ပျူတာနှင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
VGA Cable 10m White
SSK Type C To Lan Adapter HUB C540
SSK မှထုတ်လုပ်ထားသော Type-C မှ Ethernet ကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်ထုတ်လုပ်ထားသည့် LAN Adapter လေးပဲဖြစ်ပါသည်။ USB 3.0 port ၃ခုပါရှိပြီး Ethernet port တစ်ခုပါဝင်ပါတယ်။ Data transmission speed 5Gb/s ရှိပြီး OS အနေနဲ့ကတော့ Window, Mac OS, Linux, Android စတဲ့ os တွေကို အသုံးပြုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
DisplayPort တပ်ဆင်ထားသောကွန်ပျူတာကို VGA input မှတဆင့် computer, projector များကိုချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ရန် ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ computer video resolution 19200 x1200 နှင့် 1920 x 1080 Full HD resolution ထိအသုံးပြုနိုင်သောကြောင့် ကြည်လင်ပြတ်သားသောပုံရိပ်များကို မြင်နိုင်မာပဲဖြစ်ပါသည်။ VGA connector တွင် hardware နှင့် cable ကိုလုံခြုံစေသည့် screw များပါရှိပါသည်။
J5 Create HDMI To VGA Adapter Audio (JDA213S)
ဒီကေဘယ်သည် VGA to HDMI သို့ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီး အရှည်အားဖြင့် ၀.၅မီတာရှည်လျားပါသည်။ PC, Notebook, Desktop များကို VGA Output (D-Sub, HD 15 pin) ဖြင့် HDMI Input နှင့်အတူ Monitor များ၊ Projector များဖြင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤ adapter သည် ဗီဒီယိုနှင့်အသံကိုတပြိုင်တည်း ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ 1920 x 1080 resolution ဖြစ်တာကြောင့် ကြည်လင်ပြတ်သားသော ပုံရိပ်များကို မြင်တွေ့နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါသည်။
LightiningTO HDMI Adapter China L8-3SE
L8-3SE Adapter ကို Lightning connector ပါဝင်သော iPhone၊ iPad၊ iPod တို့တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဒီ Adapter နှင့် TV or Projector တို့တွင်အသုံးပြုမည်ဆိုပါက 1080p resolution ထိ ထောက်ပံ့နိုင်သောကြောင့် ကြည်လင်ပြတ်သားသော ပုံရိပ်များကို မြင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
JHZ130 HDMI To VGA Cable with audio (2M)
HDMI To VGA ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ cable ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရှည် ၂မီတာရှိပြီး Monitor များ၊ Projectorများကို connector နှင့်ဆက်စပ်သည့် ပစ္စည်းများကို ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Audio ကြိုးတွဲလျက်ပါတာကြောင့် အသံရောပါကြားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရည်အသွေးကောင်းပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ ပစ္စည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
Commscope Network Cable (Original) 3M
အရှည် ၃မီတာရှိပြီး အရည်အသွေးမြင့်မားသော cat6 cable သည် 10/100/1000 MBit Ethernet ကွန်ယက်များအတွက် အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်ပါသည်။
IR 2004,2016,2018 Drum
IR 2004,2016,2018 Drum အတွက် အသုံးပြုပေးရတဲ့ Drum လေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းလဲ သက်သာပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ပစ္စည်းလေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။
TN 116/117/118 Refill Toner
TN 116/117/118 Refill Toner လေးကတော့ Laser Toner လေးဖြစ်တာကြောင့်စာရွက်ရေများများ ပုံနှိပ်နိုင်မှာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Type C To HDMI Cable(NC)
USB-C ပါဝင်တဲ့ MacBook နဲ့ Windows Laptop တွေကနေ ပြင်ပ Display မော်နီတာတွေကိုချိတ်ဆက်ရာမှာ လိုအပ်တဲ့ Hoco အမှတ်တံဆိပ် USB Type C to HDMI Adapter ဖြစ်ပါတယ်။ USB-C ကနေ HDMI သို့ချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့အတွက်ပြင်ပမော်နီတာ/Display ကို တပြိုင်နက် ပြသပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ။ ကေဘယ်ကြိုးကို Mac, Windows နဲ့ Linux စတဲ့ OS အားလုံးနဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Internet Download Manager (IDM) သည်ဒေါင်းလုပ်အမြန်နှုန်းကို ၅ ဆအထိတိုးမြှင့်ရန်၊ ဒေါင်းလုပ်များကို ပြန်လည်စတင်ရန် နှင့် အချိန်ဇယားဆွဲရန်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘက်ပေါင်းစုံအမှားပြန်လည်နာလန်ထူခြင်းနှင့်ပြန်လည်စတင်နိုင်ခြင်းသည်ဆက်သွယ်မှုများဆုံးရှုံးခြင်း၊ ကွန်ယက်ပြproblemsနာများ၊ ကွန်ပျူတာပိတ်ခြင်းများသို့မဟုတ်မမျှော်လင့်ဘဲပါဝါပြတ်တောက်မှုများကြောင့်ပြတ်တောက်သွားခြင်းသို့မဟုတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းခံရသော downloads များကိုပြန်လည်စတင်လိမ့်မည်။ ရိုးရှင်းသောဂရပ်ဖစ်သုံးစွဲသူမျက်နှာပြင်က IDM ကိုလွယ်ကူစွာအသုံးပြုရန်လွယ်ကူစေသည်။
Optical Patch Cord Cable 5M
Optical Audio Cable သည် standard နှင့် high-definition devices များနှင့် Toslink port များတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အသံသွင်းစက်၊ DAC၊ TV နှင့် PS4၊ Playstation၊ Xbox ဂိမ်းစနစ်စသည်တို့တွင်ပါဝင်သော အသံဘားအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ Optical Cables တွင်တိုက်စားမှုခံနိုင်သည့်အပြင် connector များကို Gold-plate များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် သံချေးတက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးရုံသာမကoptimal signal transfer များအတွက် ကြားခံ Tubing လည်းပါရှိပါသည်။
Optical Patch Cord Cable 10M
NETSTRIX UTP Cat6300m Cable
Cat6Cable သည် Router များ၊ Switch box များ၊ network printer များ၊ Network ချိတ်ဆက်ထားသော Storage (NAS) product များ၊ VoIP ဖုန်းများကဲ့သို့သော ကွန်ပျူတာများနှင့် Network အစိတ်အပိုင်းများကို တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ NETSTRIX UTP Cat6300m Cable သည် အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
M One 326/328 Cartridge
M One 326/328 Cartridge လေးကတော့ Laser Cartridge လေးဖြစ်တာကြောင့် ပုံနှိပ်ရာတွင် လွယ်ကူမြန်ဆန်နေမှာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
DR-232A (32A) Drum Unit
DR-232A (32A) Drum Unit လေးကတော့ HP LaserJet Pro M203d M203dn M203dw MFP များအတွက် အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
DR-10001035 Drum Unit (For HP)
HP စက်များတွင်အသုံးပြုနိုင်သော DR-10001035 Drum Unit လေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ရုံးလုပ်ငန်းများ မိတ္တူဆိုင်များအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုဆိုရင်လဲ မမှားပါဘူးဗျာ။
5035 Colour Drum
Print ထုတ်တဲ့ အခါ အရောင်အရည်အသွေးကောင်းတာကို လိုချင်ရင်တော့ 5035 Colour Drum လေးကိုရွေးချယ်သင့်တယ်လို့အကြံပေးပါရစေခင်ဗျာ။
1610 Drum လေးကတော့ Samsung ML 1610, 1640, 2010, 2240, 2510, 2570 များမှာအသုံးပြုရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းချိုသာပြီး အရည်အသွေးကောင်းသောပစ္စည်းလေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။
NPG 67 Toner china (IR-C3320/C3330) Cyan
NPG 67 Toner (IR-C3320/C3330) Cyan သည် Printer များအတွက် အသုံးပြုရန်အထူးထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
NPG -67 Toner china (IR-C3320/C3330)M
NPG -67 Toner china (IR-C3320/C3330)M သည် Laser Cartridge ဖြစ်တာကြောင့် ပုံနှိပ်စာအုပ်များနှင့် စာရွက်စာတမ်းအတွက်လွယ်ကူစွာ ပုံနှိပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
IBM-1000 Keyboard သည်ပါးပါးလွှာလွှာဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့် အသုံးပြုရအဆင်ပြေစေနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
Fan 1GB 12cm with light
Fan 1GB 12cm with light ကွန်ပျူတာအအေးခံပန်ကာသည် ဟာ့ဒ်ဝဲ၏အိုမင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို နှောင့်နှေးစေပြီး PC ၏ သက်တမ်းကိုရှည်စေနိုင်ပါသည်။ ပန်ကာ၏ ထောင့်ရှိကူရှင်များသည် အသံလှိုင်းနှင့် ပိုမိုသေးငယ်သော တုန်ခါမှုတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသောဆူညံ့သံများကို လျှော့ချပေးသည်။
775,1155 Fan သည် သင်၏ desktop ကွန်ပျူတာအတွက် အပူဖြေရှင်းပေးပါသည်။ ပန်ကာနှင့်အလူမီနီယံအပူစုပ်တပ်ဆင်ထားပေးထားပါသည်။
PP-900 (Red) လေးကတော့ အသုံးပြုရန်လွယ်ကူတဲ့ ပစ္စည်းလေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။software နှင့်ချိတ်ရန်မလိုဘဲ USB နှင့်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ပါဝါချွေတာခြင်း၊ ပေါ့ပါးခြင်းအပြင် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောပစ္စည်းလေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။အရည်အသွေးမြင့်မားသောလေဆာညွှန်ပြစက်သည်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာအနီရောင်လေဆာမှန်ဘီလူးနှင့်မိုက်ခရိုအီလက်ထရောနစ်သတ်မှတ်ချက်ကိုအတည်ပြုထားပါတယ်။
32-55 inch Bracket
ယခု TV Bracket ၏အသွင်အပြင်လက္ခဏာ များသည် အတိမ်းစောင်းစနစ်၊ ထိတွေ့မှုရှိခြင်းစသည့် ချောချောမွေ့မွေ့ထိတွေ့မှု၊ အကျယ်ပြန့်သော အလျားလိုက်ဆုံလည်ထောင့် အသွင်အပြင်များဖြင့် သင်လိုချင်သောထောင့်ကိုချိန်ညှိပြီး မိမိလိုချင်သောနေရာတွင် ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
Wireless HeadPhone HDR 180
HDR 180 wireless headphone လေးသည်အသံလုံစေနိုင်ပြီး ကျယ်လောင်သော တကယ် real အသံကိုကြားရစေမည်ဖြစ်ပါသည်။noise များကိုလည်းလျော့ကျစေနိုင်သည့်အတွက် ကြည်လင်ပြတ်သားသောအသံကိုကြားရမှာဖြစ်ပါသည်။600 mAh battery ဖြစ်သောကြောင့် ကြာရှည်ခံသော battery ဖြစ်သောကြောင့် စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
HDMI To VGA Cable (Audio)
HDMI To VGA Cableသည် HDMI နှင့်လိုက်ဖက်သော device ကို VGA port နှင့် monitor သို့မဟုတ် projector တို့နှင့်ချိတ်ဆက်သည်။Audio port သည်စပီကာ၊ နားကြပ်၊ အသံချဲ့စက်နှင့်အခြားကိရိယာများနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်
EP-22 Cartridge သည် Canon color printer များအတွက်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး Canon EP22, Canon LBP-800/ LBP- 810/ LBP-1120 စတဲ့ model တွေမှာ အသုံးပြုနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
PI 1025 Color Laser Cartridge
PI 1025 Color Laser Cartridge သည် ၂၄လတိုင်အောင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ colour cartridge လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ HP colour laser printer များဖြစ်တဲ့ Color Laserjet Pro CP1025, CP1025nw, 100 Color, and MFP M175nw, M175a, and LBP 7010C & 7018C စတဲ့ series တွေမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
FGI 1025 Colour Laser Cartridge
1025 Colour Laser Cartridge CE311A/CF351A သည် HP colour laser printer များဖြစ်တဲ့ Color Laserjet Pro CP1025, CP1025nw, 100 Color, and MFP M175nw, M175a, and LBP 7010C & 7018C စတဲ့ series တွေမှာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ colour laser cartridge လေးပဲဖြစ်ပါသည်။ ဈေးနှုန်းသက်သာစွာနဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါသည်။
Chunni CN520 Thermometer
Chunni CN520 Thermometerကို လက်ရှိကာလမှာ အိမ်မှာဆောင်ထားသင့်တဲ့ Thermometer လေးပါ။ကိုယ့်မိသားစုကိုပဲတိုင်းတိုင်းအိမ်လာတဲ့ ဧည့်သည်ကိုပဲတိုင်းတိုင်းအဆင်ပြေမယ့် ကိရိယာလေးပါ အိမ်သုံး,ရုံးသုံး, စက်ရုံးသုံးသူတွေအားလုံးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါ(၁)စက္ကန့်အတွင်းအဖြေမှန်ဖတ်ပေးပါသည်။လူကော / အရာဝတ္ထုပါတိုင်းနိုင်သည်။ C / F (၂)ခုလုံးရပါသည်။CE & FCC, RoHS Certificate ရရှိထားပါတယ်။FDA ထောက်ခံချက်အပြည့်စုံပါရှိသောကြောင့်စိတ်ချဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
USB Divece များစွာကို တစ်ချိန်တည်းချိတ်ဆက်ရန်လိုသည့်အချိန်တွင် Port အနည်းငယ်သာပါဝင်သည့် notebook များအတွက် အထူးသင့်တော်ပါသည်။ ထို့ပြင် USB 2.0 Hub ဖြင့် အရံပစ္စည်းများ ၁၀ခုအထိကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ အလွယ်တကူထည့်သွင်းနိုင်သောကြောင့် အသုံးပြုရအဆင်ပြေစေမှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
XL-5078 USB 3.0 12 Port HUB
ပါးလွှာပေါ့ပါးသောဒီဇိုင်းနှင့် အဆင့်မြင့် USB နည်းပညာကိုပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသော USB HUB ကောင်းလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါသည်။ Port တိုင်းတွင် USB 3.0 နည်းပညာဖြင့် တပ်ဆင်ထားပြီး 5Gb/s ထိ ဒေတာများကို လွှဲပြောင်းနိုင်ပါသည်။
ECS Liva Mini PC Kit သည် အိမ်နှင့်ရုံးသုံး အသုံးပြုသူများအတွက် ပြည့်စုံသောအင်္ဂါရပ်များ၊ အရွယ်အစားသေးငယ်မှု၊ စတိုင်ကျလှပသောဒီဇိုင်ကိုအသုံးပြုထားသည်။ LIVA သည်ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ပြီး ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုဖြင့် ရှုပ်ထွေးသောကြိုးများကိုဖြတ်တောက်နိုင်သည်။ LIVA သည်ပထမဦးဆုံးအကြိမ် အသုံးပြုသူများအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းသော ၀င်ရောက်နိူင်သော PC သို့မဟုတ် streaming၊ browsing နှင့် downloading ကဲ့သို့သောပိုကြီးသည့် desktop system ကိုဖြည့်ဆည်းရန်ဒုတိယ PC အဖြစ်စံပြဖြစ်သည်။
Razer Chroma Gaming Headphone(Kraken)Quartz
Razer Chroma Gaming Headphone(Kraken)Quartz လေးသည် design ပိုင်းအနေဖြင့် သေသပ်လှပသော design ပုံစံကိုအသုံးပြုထားပါသည်။ game ကစားသည့်အခါတွင်လည်းအသံများနောက်ကျခြင်းမရှိဘဲ သွက်လျက်မြန်ဆန်နေမည်ဖြစ်ပါသည်။
Synology DS-218 Plus NAS2Bay Disk Station
Synology DS218 သည် 64-bit quad-core ပရိုဆက်ဆာအသစ်နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သော data transfer မြန်မှုကိုပံ့ပိုးပေးပြီး multimedia streaming၊ file syncing and sharing ကဲ့သို့သောကြွယ်ဝသော application များကိုထောက်ပံ့သည်။ အချက်အလက်များကို RAID 1 disk mirroring support ဖြင့်ထပ်မံကာကွယ်နိုင်သည်။
USB Extension To Lan
USB Extension ကနေ Lan ပေါက်ကို ပြောင်းလဲ ပေးတဲ့ ပစ္စည်းလေးဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
NGFF SSD USB 3.0 Flash Drive
NGFF SSD USB 3.0 Flash Drive လေးကတော့ Aluminum alloy နဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး Voltage DC 5V ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။Window2000/2003/XP/7/8, Linux, Mac OS တို့နဲ့ Support လုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။
4 in 1 OTG Cardreader (Andorid,Apple,Type C,OTG)
4 in 1 OTG Cardreader (Andorid,Apple,Type C,OTG) သည်နောက်ဆုံးပေါ်4(Micro SD) Card Reader ဖြစ်လို့ပါးလွှာသေးငယ်ပြီး ပိုမိုမြန်ဆန်စေပါသည်။ ထို့ပြင် USB2.0 / 3.0, IOS, Samsung / Sony / HTC / Google Nexus ကဲ့သို့သော Android ဖုန်း၊ Type-C ဖုန်းနှင့်လည်း တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Face Plate 1Port (Pri)
Face Plate 1Port (Pri) သည် ဖုန်မှုန့်များကိုကာကွယ်ရန်အတွက် အဖုံး ဖုံးထားပါသည်။ အဆက်အသွယ်ပင်၏ ထိတွေ့ခြင်းမှဖုန်မှုန့်များနှင့် ရေကိုကာကွယ်နိုင်ပြီး အဓိကကျသည့်အပိုင်းများသို့မဟုတ် RJ11 / RJ45 ဂျက်အကာအကွယ်များကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားသော အဖြူရောင်ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းများ၊ ဘောင်အတွင်း၌ ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ရန် အလွန်လွယ်ကူပြီး လှပပါသည်။
Crimping Tool (Orange)
Crimping Tool လေးကတော့ အသွားလေးတွေကို ဖြုတ်နိုင်တပ်နိုင်ပြီး Network ကြိုးလေးတွေကို အလွယ်တကူဖြတ်တောက်နိုင်မဲ့ ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။
Crimping Tool 39004/KS15
Crimping Tool လေးကတော့ Network ကြိုးလေးတွေကို အလွယ်တကူဖြတ်တောက်နိုင်မဲ့ ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။
Level One Network Card
Level One Network Card လေးကတော့ ကွန်ပျူတာများကိုအဝေးမှ startup လုပ်ရန် Wake-on-LAN ပါ၀င်သည်ပြီး ကွန်ရက်လည်ပတ်မှုစနစ်များ (NOS) အများစုကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။IEEE 802.3x Flow Control သည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအချက်အလက်ပေးပို့ခြင်းအတွက်ရှုပ်ထွေးသော packets များမှကာကွယ်သည်။
Media Converter Adapter
Media Converter Adapter လေးကတော့ 100-250V Input အတွက်ပါဝင်ပြီး 5V-2A ကတော့ Output အဖြစ်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Link-MI HDMI Converter
Link-MI HDMI Converter သည် အဆင့်မြင့်သော အချက်ပြထုတ်လုပ်မှုကိုတိကျမှု၊ အရောင်များ၊ resolution များနှင့်အသေးစိတ် အချက်အလက်များဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးထားသည်။ HDMI, SD/HD/3G SDI interface port များပါဝင်သောကြောင့် လူကြီးမင်းတို့အတွက် ရွေးချယ်စရာများသည်။ HDMI signal to SD/HD/3G SDI signal သို့ပြောင်း၍လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
Patch Cord LC-SC 5m
Patch Cord LC-SC 5m cable သည် networking equipment များနှင့် Cisco CAB-SM-LCSC-5M နှင့်ညီမျှပါသည်။အရည်အသွေးမြင့်သော optical cable နှင့် connectors များဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားပြီးယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှုရှိစေပါသည်။
IBM M-506 Number Pad
IBM M-506 Number Pad မိမိ ဖုန်းဖြင့် အလွယ်တကူစားရင်းဇယားများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
HB 2000 Bluetooth Keyboard
HB 2000 Bluetooth Keyboard သည်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်သောကြောင့် စာရိုက်သည့်အခါတွင်လည်း တိကျပြတ်သားမှုကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ HB 2000 Bluetooth Keyboard ဖြစ်သောကြောင့် ကြိုးများဖြင့် အလုပ်မရှုပ်စေတော့ဘဲ အသုံးပြုရရိုးရှင်းအဆင်ပြေစေမည်ဖြစ်ပါသည်။
Mini Power Supply သည် သင့်အားစွမ်းအင်ချွေတာမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အသုံးပြုရန်အထူးသင့်လျော်ပါသည်။
12Bay Power Supply
12Bay Power Supply သည်အရည်အသွေးမြင့်ပြီး သင့်အားစွမ်းအင်ချွေတာမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကာကွယ်ရန်အတွက် အသုံးပြုရန်အထူးလိုအပ်ပါသည်။
HDMI Cable(HS premium)
HDMI Cable ဖြစ်ပြီး အရည်အသွေးပြည့်ဝသော Cable အမျိုးအစားဖြစ်၍ ပုံရိပ်များကို ကြည်လင်ပြတ်သားစွာမြင်နိုင်ပြီး Resolution 4Kထိ support ပေးနိုင်ပါသည်။
HDMI Cable (HS premium) 20M
HDMI Cable 30M(HS premium)
HDMI To Micro Extension
HDMI To Micro Extensionသည်3D ဗွီဒီယိုဖိုင်များအတွက် input / output protocols များကိုသတ်မှတ်ပြီး 3D resolution တွင် 1080p အထိထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။
2 USB To Sata IDE Cable
SB 2.0 to IDE SATA adapter သည် USB 2.0 မှတစ်ဆင့် SATA သို့မဟုတ် IDE hard drive ရှိမည်သည့်စံ 2.5 သို့မဟုတ် 3.5 ကိုမဆိုချိတ်ဆက်ပေးသည်၊၊ converter cable သည်ကြာရှည်ခံပြီးခရီးသွားလာသူများအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုသေချာစေသည်။
တိကျသောတည်နေရာကိုဆုံးဖြတ်ရန် GPS / GSM tracker သည် Global Positioning System satellites သို့မဟုတ် Mobile Communication အတွက် Global System ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ မိမိတို့မရောက်ဖူးသောဒေသများကို အချိန်ကုန်သက်သာပြီး လျှင်လျှင်မြန်မြန်နှင့်အချိန်တိုအတွင်း အထိရောက်ဆုံးဆောင်ရွက်နိုင်မှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
Wireless Mini Keyboard (backlit)
Wireless Mini Keyboard (backlit) သည် သင့်တင့်သော keyboard အရွယ်စားဖြစ်သောကြောင့် အသုံးပြုရအဆင်ပြေစေနိုင်ပြီး ရောင်စုံမီးများလည်းထည့်သွင်းအသုံးပြုထားသည်။ battey ပိုင်းအနေဖြင့် Li-ion Battery ဖြစ်သောကြောင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Gold Sun 978 GSM Fixed Phone
Gold Sun 978 GSM Fixed Phone သည်GSMအတွက်အသုံးပြု၍ ရပြီး Battrery နေနဲ့ 1200mAh ပါဝင်ပါတယ်၊၊
XL3034Port HUB
XL3034Port HUB သည် mouse, keyboard, card reader, USB cable သို့မဟုတ် U Disk စသည့် USB Device4ခုကို တစ်ပြိုင်နက်တည်းချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်မှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
Google Play Card $10 သည် applications များ game များကိုအစရှိသည့်တိုကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
1010 Drum သည် HP Laserjet 1010 1012 1015 1020 1022 စတဲ့ HP series တွေအတွက် Replacement Drum အဖြစ်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းသက်သက်သာသာနဲ့ ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
35A Drum သည် HP 35A series တွင်သာမက 36A,78A,83A,88A,85A & Canon 328/337/912/925 စတဲ့ series များတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Chione M2-240R CPU Liquid Cooler Fan
Chione M2-240R CPU Liquid Cooler Fan ရှိကြေးနီအောက်ခံပြားသည် အအေးခံစွမ်းရည်မြင့်မားစွာရရှိစေရန် အပူဖြန့်ဖြူးခြင်းကို မြင့်မားစေပါသည်။
HDMI WiFi Display Dongle (AD-02)
HDMI WiFi Display Dongle (AD-02) သည် တီဗီပြသရန် Dongle သို့HDMI + WIFI ကို သုံးပါသည်။ အွန်လိုင်း Streaming ကစားသမားနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွက် ကြိုးမဲ့ကွန်ယက် သို့မဟုတ် Wifi မှတစ်ဆင့် လူကြီးမင်း၏ ဒေတာကွန်ယက်နှင့် အင်တာနက်ကို ဆက်သွယ်နိုင် ပါသည်။
P30 Wireless Presenter
P30 Wireless Presenter သည် software များနှင့်ချိတ်ဆက်စရာ မလိုဘဲအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ တာဝေးပစ် 2.4GHz ကြိုးမဲ့နည်းပညာသည်ကွန်ဖရင့်ခန်းကြီးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သောထိရောက်သောတင်ဆက်မှုအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။
P16 Wireless Laser Pointer
Laser Pointer ပါ ၀ င်သည့် Targus ကြိုးမဲ့သည်သင်၏တင်ပြချက်ကိုပေ ၅၀ အကွာအဝေးမှအလွယ်တကူထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ကောင်းမွန်သော ဒီဇိုင်းကြောင့်လွယ်ကူစွာကိုင်ထားနိုင်ပြီးခလုတ်များကိုသက်တောင့်သက်သာကိုင်တွယ်နိုင် သည်။
HK-3910 Wireless Keyboard & Mouse
HK-3910 Wireless Keyboard & Mouse သည် wireless ဖြစ်သောကြောင့် ကြိုးများဖြင့်မရှုပ်စေတော့ဘဲ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ key pad များကိုလည်း အသုံးပြုရအဆင်ပြေစေရန် ပြုလုပ်ပေးထားပါသည်။
K4 Wifi Display Dongle
K4 Wifi Display Dongle သည်လူကြီးမင်း၏တီဗွီ၊ ပရိုဂျက်တာ၊မည့်သည့် HDMI မျက်နှာပြင်ကိုမဆို ကြိုးမဲ့ဖြင့် ဖုန်း၊တက်ဘလက်သို့မဟုတ် PC မျက်နှာပြင်ကိုထင်ဟပ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
M9 Plus Wifi Display Dongle
M9 Plus Wifi Display Dongle သည်လူကြီးမင်း၏တီဗွီ၊ ပရိုဂျက်တာ၊မည့်သည့် HDMI မျက်နှာပြင်ကိုမဆို ကြိုးမဲ့ဖြင့် ဖုန်း၊တက်ဘလက်သို့မဟုတ် PC မျက်နှာပြင်ကိုထင်ဟပ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
BJB A8,A9 Cooling Fan
BJB A8,A9 Cooling Fan လေးသည် Laptop အသုံးပြုရာတွင် အပူဒဏ်ကိုသက်သာစေရန်အသုံးပြုနိုင်သည့် Cooling Fan လေးဖြစ်ပါတယ်။
A2 Cooling Fan
A2 Cooling Fan သည် Laptop များအသုံးပြုရာတွင်အပူချိန်သက်သာစေရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည့် Cooling Fan လေးဖြစ်ပါသည်။
Yi Smart Dash Camera(YCS-1015)
Yi Smart Dash Camera သည် နေ့စဉ်မောင်းနှင်သွားလာနေရတဲ့ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ တန်ဖိုးကြီးကားများအတွက် မရှိမ ဖြစ်လိုအပ်သော Camera လေး တစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ အရေးပေါ်အခြေနေများအတွက် G-Sensor စနစ်ဖြင့် အလို လျောက် လျင်မြန်စွာ ဖမ်းယူပေးခြင်း၊ ညဘက်တွေမှာလည်း ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ရိုက်ကူးနိုင်ခြင်း၊ Dash Cam မှာ Wi-Fi စနစ် ပါရှိပြီး Yi Application နဲ့ ချိတ်ဆက်ကာ Recording Video များကို ဖုန်းသို့ အလွယ်တကူ ကူးပြောင်း သိမ်းဆည်းနိုင်ခြင်း၊ ရိုက်ကူးထားတဲ့ Video file များသိမ်းဆည်းနိုင်ဖို့ Micro SD Card 8GB to 64 GB ( Class 10 ) အထိ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း ၊ auto delete system ပါဝင်တော့ Card ပြည့်မှာ မစိုးရိမ်ရတဲ့အတွက် ကောင်းမွန်သော Camera တစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။
Orvibo SC30PT WiFi Smart Camera
YDD CD-R အမှတ်တံဆိပ်သည် သီချင်းများ၊ Video များကို ထည့်၍ သိမ်းထားနိုင်သော အခွေလွတ်ချပ်ပြားဖြစ်ပါသည်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ခြင်း၊ သိမ်းဆည်းရလွယ်ကူခြင်း၊ ဈေးလည်းချိုသာခြင်းတို့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့စိတ်တိုင်းကျစေသော ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါသည်။
300C Sealer များသည် Thermoplastic (သို့မဟုတ်) Poly Film ပစ္စည်းများကိုမဆို တံဆိပ်ခတ်ခြင်းအတွက်အမြန်၊တံဆိပ်ခတ်နိုင်မှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
Beat TM-045 Bluetooth Headphone
Beat TM-045 Bluetooth Headphone လေးကတော့ Bluetooth Version 4.0 ဖြစ်တာကြောင့် အသံတွေ နောက်ကျမနေဘဲ ကြည်လင်တဲ့ အသံတွေကို နားဆင်နိုင်မှာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။အသုံးပြုချိန်တွင်လဲ Portable ဖြစ်တာကြောင့် သုံးရ အဆင်ပြေစေတဲ့ ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။
Luminator 320 Plastic Machine Hand
Luminator 320 Plastic Machine Hand သည်မှတ်ပုံတင်(သို့မဟုတ်) အမျိုးမျိုးသောစာရွက်စာတမ်းများကို တံဆိပ်ခတ်ရာတွင် အလျှင်အမြန်တံဆိပ်ခတ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
K03,04,06 Wireless KB & Mouse
K03,04,06 Wireless KB & Mouse သည် wireless ဖြစ်သောကြောင့် ကြိုးများဖြင့်မရှုတ်စေတော့ဘဲရိုးရှင်းစွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။flat Key ဒီဇိုင်း ဖြစ်သောကြောင့် အသုံးပြုရအဆင်ပြေစေမည်ဖြစ်ပါသည်။
Snap Plug Crimping(RJ45)
Snap Plug Crimping(RJ45) သည် Network ကြိုးလေးတွေကို အလွယ် တကူဖြတ်တောက်နိုင်မဲ့ ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ crimper သည်၎င်းတို့၏ connectors များနှင့်သာအလုပ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ crimp tool သည်အခြား plug များအတွက် အသုံးပြုပါကအလွယ်တကူပျက်စီးလွယ်ပါသည်။
DTS GM-001 Headphone
DTS GM-001 Headphone သည် noise များကိုလျော့ချနိုင်ပြီး ကြည်လင်ပြတ်သားအသံကိုရရှိနိုင်ပါသည်။
H7 Coloful Water Gaming Headphone
H7 Coloful Water Gaming Headphone သည် အသံကိုလုံစေပြီးကြည်လင်ပြတ်သားသောအသံကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။Colorful LED မီးများကိုအသုံးပြုထားပါသည်။
HDMI Cable 3m 4K (HS Premium)
HDMI Cable 10M 4K (HS Premium)
Az Tech External USB Modem
Az Tech External USB Modem သည် ကွန်ပျူတာများတွင် Wifi တပ်ဆင်လိုလျင်အထူးသင့်တော်ကောင်းမွန်သောပစ္စည်းလေးဖြစ်သည်။ ပါဝါ adapter မလိုအပ်ဘဲ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ analogue အတွက် V.92 နှင့် V.44 စံနှုန်းများကိုထောက်ပံ့သည်။
D8 5G Wireless Display Dongle
D8 5G Wireless Display Dongleသည် အရည်အသွေးမြင့်မားသောရုပ်ပုံအရည်အသွေး၊ IOS8.0 နှင့်အထက်အတွက် Android 4.4 နှင့်အထက်အတွက်ရိုက်ကူးထားသောဗွီဒီယိုများနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုချောချောမွေ့မွေ့ပြန်ဖွင့်နိုင်ရန်အတွက်အထောက်အပံ့ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။စတိုင်ကျပြီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းပြီးဖျော်ဖြေရေး၊ ရုံးသုံးများနှင့်ဂိမ်းကစားသူများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Wacom Intuos S Black Creative Pen Tablet(CTL-4100/KO-C)
Graphic designer တွေနဲ့ ပုံဆွဲလေ့ကျင့်ချင်တဲ့သူတွေ CTL-4100 လေးလာပါပြီ၊၊ပုံဆွဲဖို pen လေးပါဝင်ပြီး မျက်နှာပြင်ကို လက်နဲ့ထိတွေ့ရင် အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ပဲ သူ့ရဲ့ pan နဲ့ဆွဲမှပဲ အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်လို့ လက်နဲ့ထိမိတာကြောင့် မဲသွားတာတွေ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။တပ်ဆင်ဖိုအတွက် USB cable ပါဝင်ပါတယ်။
" data-item-price="723,800 Ks" data-item-avail="" data-item-availdesc="">
ပုံဆွဲလေ့ကျင့်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် အဖက်ဖက်က ပြီးပြည့်စုံတဲ့ Wacom One Creative Pen Display Tablet(DTC133W0C) ရဲ့ Size ကတော့ 13.3" inches ရှိပြီး ပုံဆွဲဖို ကောင်းကောင်းလုံလောက်တဲ့အရွယ်အစားမှာရှိပါတယ်၊၊ပုံဆွဲဖို pen လေးပါဝင်ပြီး မျက်နှာပြင်ကို လက်နဲ့ထိတွေ့ရင် အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ပဲ သူ့ရဲ့ pan နဲ့ဆွဲမှပဲ အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်လို့ လက်နဲ့ထိမိတာကြောင့် မဲသွားတာတွေ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။တပ်ဆင်ဖိုအတွက် USB cable ပါဝင်တယ်၊၊
ERC38 Ribbon (BK)
ERC38 Ribbonသည်အနက်ရောင် Cartridgeဖြစ်ပြီး printer၏ လည်ပတ်မှုနှင့်သက်တမ်းရှည်စေရန်အတွက်ကောင်းမွန်ပြီး ဈေးသက်သာစွာဖြင့် အသုံပြုနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Andirod T-96 Mars 4K 1G/8G TV Box
Andirod T-96 Mars TV Box လေးကတော့ 4K resolution နဲ့ အပြည့်အဝကြည့်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး Ram 1G/ Storage 8G ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ wireless display ချိတ်ပီး ကိုယ့်ရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းကနေ app ,video ,photo ,game တွေကို TVscreen ပေါ်ကနေ ကြည့်ရှုအသုံးပြုနိုင်ပြီး USB ပေါက်တွေ ပါဝင်တာကြောင့် wireless keyboard, mouse ,Memory Stick နဲ့အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများတပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Dolin DL3405 Breakfast Machine
DL3405 Breakfast Machine လေးကတော့ Multi-function ချက်ပြုတ်နိုင်တဲ့ ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။Power 1320Wနဲ့ ချက်ပြုတ်ပေးပြီး Voltage-220V ဖြစ်ပါတယ်။Nonstick Coating သားဖြစ်ပြီး ချက်ပြုတ်ခြင်းတွေကို ပြိုင်တူပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်တာကြောင့် အချိန်တိုတို အတွင်းမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ပြီးအရသာကောင်းမွန်တဲ့ ဟင်းလျာများကို ချက်ပြုတ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Hyundai HY-K300 Mice
Hyundai HY-K300 Miceသည် အနေအထားကိုချိန်ညှိနိုင်သည့်မိုက်ကရိုဖုန်းတပ်ဆင်ထားသည်။ ၃.၅ မီလီမီတာ aux plug ကိုအသုံးပြုထားပြီးမိုက်ခရိုဖုန်းသံကရှင်းလင်းပါသည်။ထိုအပြင်ကြိမ်နှုန်း respone 20-16000Hz နှင့် ဗို့ 1-10Vလေးပဲဖြစ်ပါသည်။
M120 Portable Lable Printer
M120 Lable Printer လေးကတော့ လုံးဝ Portable ဖြစ်စေပြီး မိမိ အဆင်ပြေသလို နေရာတိုင်းကို သယ်ဆောင်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။printing resolution 203dpiပါဝင်ပြီး 20-50mm စာရွက် အရွယ်အစားလေးတွေနဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။Built-in အနေဖြင့် lithium battery 1500mAh ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။အားသွင်းပြီး 4-5 hours လောက် အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီးလဲ Print ထုတ်နိုင်တာကြောင့် အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေးအသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
M200 Portable Lable Printer
M200 Lable Printer လေးသည် Resolution: 203dpi ရှိပြီး Printing Speed အနေဖြင့် 35 mm /s ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။Connectivity Technology Bluetooth သုံးပေးထားပြီး Photo တွေကို စိတ်တိုင်းကျ ထုတ်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီး အသုံးပြုရလဲ အဆင်ပြေတာကြောင့် အရည်သွေးကောင်းတဲ့ ပစ္စည်းလေးဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
JBL MZ-218ST/J-03 Headphone
JBL MZ-218ST/J-03 Headphone လေးကတော့ Frequency Response 20Hz – 20,000Hz ရှိတဲ့ ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ Extra Bass Diaphragm ဖြင့်စွမ်းရည်မြင့်တဲ့ bass သံတွေကို နားဆင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
STN-36 Wireless Headset
STN-36 Wireless Headset လေးကတော့ Frequency Response 2.4GHz - 2.4835GHzရှိပြီး Bluetooth: 5.0ဖြစ်တာကြောင့် အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ Headphone လေးဖြစ်ပါတယ်။